Ny alin�ny alahady 24 Oktobra lasa teo, tamin�ny roa ora maraina, nidiran� ny jiolahy iray an-keriny ny tranona ramatoa iray mpampianatra ao amin�ny sekoly fanabeazana fototra ao amin�ny fokontany Marojala.
Efa eo am-pandriana ilay mpampianatra no tonga ilay olon-dratsy. Novakiana ny varavarankelin�ilay trano ary teo izy no niditra. Nitondra irony antsy lava irony ity jiolahy ity. Vola sy volamena no nangatahin�ilay jiolahy tamin�ilay mpampianatra nefa nilaza taminy itsy farany itsy fa tsy manana izany zavatra angatahiny izany. Tsy neken�ilay jiolahy anefa ny filazan�ilay mpampianatra ary novaliany hoe � Efa ela ianao no niasa kanefa milaza tsy manana izany�. Avy hatrany dia nasain�ilay olon-dratsy tamin�ny antsy ilay ramatoa ka voa teo amin�ny handriny. Mbola nanamafy ny tsy fananany na vola na volamena homena azy anefa ilay mpampianatra ka nasian�ilay olon-dratsy fanindroany sy fanintelony ary faninefany. Ny t�nana havanana sy havia no nentin�ity ramatoa ity niaro ny lohany mba tsy hahavoa azy indray ny tetitetika tamin�ny antsy ary naratra mafy tokoa.
Henon�ny zanak�ilay ramatoa matory any amin�ny efitra hafa avokoa izany zavatra izany. Tsy nijanona tao izy fa lasa nandeha niantso olona izay nihari-tory tamina tsimandrimandry teo an-tanana. Nisy famadihana tao tamin�io fotoana io. Niaraka nirihotra nandeha tao amin�ilay trano ny olona marobe. Naratra mafy ary efa lavo ilay ramatoa no tratran�ny fokonolona tonga hamonjy nefa efa nitsoaka ilay jiolahy. Nentin�ireo fokonolona teny amin�ny tobim-pahasalamana tao an-toerana teo no eo ilay naratra kanefa voatery nalefan�ny mpitsabo ho any amin�ny Hopitalibe ao Besopaka izy noho ny habetsahan�ny ratra teny aminy. Isan�ny voatetitetika ihany koa mantsy ny teo ambanin�ny fon�ilay ramatoa. Tsy tana anefa ny fofonain�ilay mpampianatra ka maty izy tsy ela loatra taorian�ny nahatongavany tao Besopaka. Efa karohina ity olona nahavanon-doza ity amin�izao fotoana izao.